Vaovao - Karazana tavoahangy inona no ampiasaina amin'ny menaka ilaina
Karazana tavoahangy inona no ampiasaina amin'ny menaka ilaina
Mba hamantarana ny tavoahangy, jereo aloha ny lanjany.Mavesatra kokoa ny tavoahangy mitovy amin'izany.Faharoa, tsarao raha lasitra mandeha ho azy ny fanambanin'ny tavoahangy (tsara kokoa noho ny tavoahangy vita amin'ny tanana ny lasitra mandeha ho azy).Misy lavaka miendrika eo amin'ny farany ambany amin'ny tavoahangy lasitra mandeha ho azy.Ny lavaky ny mpanamboatra samy hafa dia mijery hafa, anisan'izany ny boribory sy ny efamira.
Farany, jereo ny fitovian'ny tavoahangy ary atodiho mankany amin'ny loharanon-jiro ilay tavoahangy.Ny tavoahangy tsara dia afaka mahita mazava tsara fa tsy hiparitaka ny hazavana.Ny hazavana miparitaka dia manondro fa tsy mitovy ny rindrin'ny tavoahangy.Ny tavoahangy menaka tena ilaina dia azo fantarina amin'ny fomba mitovy.
Ho an'ny mpanamboatra tavoahangy fitaratra, ny fanaraha-maso ny kalitao dia dingana tena ilaina sy manan-danja amin'ny fizotran'ny famokarana ary fomba iray lehibe hiantohana ny kalitaon'ny vokatra.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, miaraka amin'ny fampandrosoana mitohy ny famokarana tavoahangy fitaratra teknolojia fisafoana sy ny fampiharana ny fitaratra kilema amin'ny aterineto rafitra detection, ny fisafoana hafainganam-pandeha dia tena haingana, izay nandray anjara lehibe tamin'ny fampiroboroboana ny avo-kalitao famokarana tavoahangy fitaratra.Ny tavoahangy menaka tena ilaina dia ho tsara kokoa.
Atao anaty tavoahangy anaty vera maizina ny menaka essentiel.Ny fitaovana famenoana fitaratra sy ny kaontenera dia manana tombony maro:
1. Ny fitaovana fitaratra dia manana fahaiza-manao sakana tsara, izay afaka misoroka tsara ny fanafihan'ny oksizenina sy ny entona hafa amin'ny atiny, ary ny fisorohana ny singa mikorontana amin'ny atiny tsy hikorontana amin'ny rivotra;
2. Ny tavoahangy menaka tena ilaina dia azo ampiasaina imbetsaka, izay mety hampihena ny vidin'ny fonosana;
3. Ny fitaratra dia afaka manova mora foana ny loko sy ny mangarahara;
4. Ny tavoahangy fitaratra dia azo antoka sy madio, manana fanoherana tsara amin'ny harafesina sy fanoherana asidra, ary mety amin'ny fonosana asidra;
Fotoana fandefasana: Dec-20-2021
siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, Tavoahangy Saosy Glass Bbq, tavoahangy diffuser volotara, tavoahangy ranom-boankazo, zava-pisotro misy tavoahangy vera, tavoahangy vera labiera,